Nahatratra ny ‘kanji-n’ny taona’ ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2020 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, русский, English
Tarehin-tsoratra shinoa (kanji) “mitsu” (密) voafantina ho kanji mety indrindra maneho ny taona 2020 ho an'i Japan. Avoaka isan-taona ao amin'ny tempoly manantantara Kiyomizu ao Kyoto ny kanji. Pikantsary avy amin'ny fantsona ofisialy FNN.
Taorian'ny taona nanjakazakan'ny valan'aretina COVID-19, nofidian'i Japana ny 密 (mitsu) ho kanji (tarehintsoratra shinoa) ho an'ny taona.
Raha adika ara-bakinteny hoe “tsiambaratelo,” ny tarehintsoratra 密, amin'ity indray mitoraka ity, azo adika hoe “mikantona, feno olona na mirindrina,” ary manondro ireo “mitsus telo” (三密) izay mandrafitra ny setriny ara-pahasalamam-bahoaka fototra manoloana ny COVID-19 tao Japana.
Ny “3 Cs” (三密) izay nitari-dalana ny setriny fototra ara-pahasalamam-bahoaka ny areti-mandringana COVID-19 tamin'ny taona 2020. Saripikan'ny Government of Japan, CC-BY 4.0.
Amin'ny fiteny anglisy, ny mitsus telo dia fantatra amin'ny “three Cs” [C anankitelo], midika hoe “toerana feno olona,” “tahala mikatona” ary “fametrahana fifandraisana akaiky” — zavatra telo anoroana ny olona idifiana mba ifehezana ny fielezan'ny COVID-19.
Isan-taona, ny Japanese Kanji Proficiency Society (財団法人日本漢字能力検定協会) manondro kanji an'ny taona iray mifototra amin'ny vokatry ny fitsapan-kevitra manerana ny firenena. Olona mihoatra ny 208.000 manerana an'i Japana no mifidy lisitra kanji, ary mitsu no voalahatra ho voalohany, nahazo vato 28.401.
Amin'ny maha-mpandika teny azy, nanamarika i Richard Medhurst, hita amin'ny fangaron-teny ny tarehin-tsoratra 密 ary mifandraika amin'ny “tsiambaratelo”:
So 密 is the kanji of the year. 3 mitsu aside, it's pretty versatile – here's a “secrecy”-related selection.
密猟（みつりょう） = poaching
密教（みっきょう）= esoteric Buddhism
— Richard Medhurst 📚 🇯🇵 (@RichardMedh) December 14, 2020
[Ahoana ny fanononana ny voanteny tsirairay]
密輸（mitsuyu) = fampidirana an-tsokosoko
密猟（mitsuryu) = mihaza tsy ara-dalàna
密航者（mikkosha) = mpandeha miafina [an-tsokosoko]
密教（mikkyo) = esoteric Buddhism
Anisan'ny voafantina ny kanji hafa malaza toy ny 禍 (ka, loza), 病 (yamai, faharariana) ary 新 (shin, vaovao, tahaka ny ao amin'ny “coronavirus vaovao”).
Tsy ny rehetra no nifantoka tamin'ny ampahany miiba amin'ny taona 2020 rehefa nisafidy kanji mahasolotena ny taona. Ao amin'ny fakan-kevitra hafa, nosafidian'ny sekoly fanabeazana fototra Japoney ny tarehintsoratra izay maneho ny ampahany tsara tamin'ny taona nodiavina, toy ny fahafahana nandeha an-tsekoly na ny fandaniam-potoana niarahana tamin'ny namana rehefa navotsotra ny ezaka fanokana-monina tamin'ny lohataona tao Japana.
Japanese elementary school students picked 笑 (shō/warau), meaning “laugh” or “smile,” as the top kanji of 2020.https://t.co/CnIOhNumEc
— Nippon.com (@nippon_en) December 21, 2020
Notsongain'ny mpianatra fanabeazana fototra japoney ny 笑 (shō/warau), midika “hehy” na “tsiky”, ho kanji faratampon'ny taona 2020.
Raha oharina amin'ny firenen-kafa, heverina ho nahafehy ny COVID-19 i Japana amin'ny ankapobeny tamin'ity taona ity, amin'ny ampahany noho ny setriny nataon'ny fiarahamonina. Na izany aza, tamin'ny mihintsan-dravina sy fiandohan'ny ririnina, nihantona ho avo hatrany ny tranga COVID-19 tany amin'ny faritra sasany tao Japana, nahatonga ny vondrom-pitsabo sasany hanambara tsy amin'ny fomba ofisialy “ny fahamehana” tamin'ny desambra rehefa niha[nifintina] ny fahazakan'ny hopitaly.
Tamin'ny tapaky ny volana desambra, nanambara governemanta foibe japoney ny hampiato ny programa malaza nampiroborobo ny fizahantany tamin'ny fanomezana fanampiana sy fikarakarana fandraisam-pivahiniana tao Japana. Haato ny drafitra manomboka ny 28 desambra ka hatramin'ny 11 janoary, raha nandehandeha niala avy amin'ny tanandehibe nankany an-tanindrazany any ambanivohitra niaviany ny japoney.
Niangavy ny vahoaka ihany koa ny Praiminisitra Japoney hidify izay mety ho fifandraisana akaiky amin'ny hafa — raha lazaina amin'ny teny hafa “tsarovy ny 3 Cs.” Na izany aza, vao maika nahazo tsikera bebe kokoa i Suga, izay efa nihena haingana dia haingana sahady ny fitiavan'ny olona azy hatramin'ny nandimbiasany an'i Abe Shinzo amin'ny toeran'ny praiminisitra tamin'ny septambra rehefa tsikaritra fa nanao fiaraha-misakafo goavana niaraka tamin'ny politisiana hafa izy.
Ny sakafo dia efa fifangarihana mivantana amin'ny torohevitry ny governemanta hidify amin'ny fanaovana fivoriana kely isam-bondron'olona, ary voatery i Suga namaly ny tsikera sy nanazava.
Tamin'ny fanoratana ho an'ny Bloomberg, nozarain'i Gearoid Reidy, masoivohony ao Japana ny heviny amin'ny voambolana maneho indrindra ny fiafaran'ny taona 2020 ho an'ny praiminisitra japoney.
Will the prime minister prove to be FLASH IN THE PAN and end up with his goose COOKED as he faces a GRILLING over this HALF-BAKED dinner party? Is the HEAT ABOUT TO BE TURNED UP or will things SIMMER DOWN?https://t.co/Yd6G9VcXWu
— Gearoid Reidy (@GearoidReidy) December 16, 2020
Hoporofoin'ny praiminisitra ve fa ho haingana izy ao anaty lapoaly ary hiara-masaka amin'ny gisa raha miatrika fitonoana eo amin'ny lanonam-pisakafoanana mbola tsy masaka tsara? Mbola hiakatra kokoa ve ny hafanana sa hihatony kokoa ny raharaha?